C007 : HELMET Brand AVEX – ดีกว่าทิ้ง ชุมชนคนไม่ทิ้งของ DEE KWA THING
Home สินค้าภาคอุตสาหกรรม C007 : HELMET Brand AVEX
C007 : HELMET Brand AVEX
HELMET Brand AVEX:
ထိုင်းနိူင်ငံအတွင်း 1983 နှစ်ကစတင်တည်ထောင်ထားတဲ့ အတွေ့အကြုံ 35 နှစ်သက်တန်းရှိတဲ့ P.Narong&P.N.I.Co.,Ltd.
မှနေပြီးတော့ဆိုင်ကယ်သမား ညီငယ် ညီမငယ်များနှင့် ဦးဦး၊ ဒေါ်ဒေါ်တွေအန္တရာယ်ကင်းဝေးရေးကိုရှေးရှု ပြီး
ခေတ်မီ ကောင်းမွန်သောကုန်ကြမ်းများနှင့်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ဆိုင်ကယ်ဦးထုပ်များကိုမြန်မာပြည်တွင်းသို့ AVEX Brand အမည်ဖြင့်စတင်တင်ပို့ရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်
LB အမျိုးအစားနဲ့Scorpion တို့ကိုမြန်မာတနိူင်ငံလုံးသို့ဖြန့်ချီနေပါပြီ
အနည်းဆုံး 24 လုံးမှာယူရမှာဖြစ်ပါတယ်
ဦးထုတ် Size မှာFree Size ဖြစ်ပြီး အဖြူရောင်၊အနက်ရောင်နှင့် ခဲနက်ရောင်များရှိပါတယ်( 24 လုံးမှာ ရောင်စုံစိတ်ကြိုက်အရောင်များကိုရွှေးချယ်နိူင်ပါတယ်)
LB ဈေးနူန်ူးတစ်လုံ3း92 ဘတ်
Scorpion ဈေးနူန်းတစ်လုံး 434 ဘတ်
(ငွေဈေး 43.5 နဲ့မြောက်ပါတယ်)
ပို့ရန်ကြာချိန်ငွေလွှဲပြီး 5-7 ရက်အတွင်းဖြစ်ပါတယ်
အောက်ပါ Link:: ကိုနှိတ်ပြီးစက်ရုံသို့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိူင်ပါတယ်
รหัสสินค้า: C007 หมวดหมู่: สินค้าภาคอุตสาหกรรม
Share "C007 : HELMET Brand AVEX" on Facebook
Share "C007 : HELMET Brand AVEX" on Google Plus
Pin "C007 : HELMET Brand AVEX" on Pinterest
2.วิธีการขนส่ง ส่งถึงมือลูกค้าในเมืองเมียวดี ประเทศMyanmarโดยราคาสินค้าจะถูกรวมค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายค่าพิธีการภาษีฝั่งประเทศไทยและฝั่งประเทศพม่า>จนถึงเมียวดีไว้ในสินค้าแล้ว (ลูกค้าชาวเมียนม่าร์ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งจากเมียวดีไปปลายทางเอง **หรือติดต่อขอรับราคาค่าบริการจากเราได้ )
3.ကုန်ပစ္စည်းဈေးနူန်း – ကုန်ပစ္စည်းဈေးနူန်းများတွင်မြဝတီအရောက်အခွန်ခနှင့်ပို့ခပေါင်းထည့်ထားပြီးဖြစ်သည်။
4.เงื่อนไขอื่นฯ สินค้ามีราคาส่ง สนใจเพื่อซื้อไปขายต่อโปรดคลิ๊ก!!
มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “C007 : HELMET Brand AVEX” ยกเลิกการตอบ
IT0037 :: ขาตั้งกล้องวงจรพลาสติก
IT0138 :: ที่วัดความดัน Blood Pressure Monitor
BB0070 :: กระเป๋าผ้าเอนกประสงค์
IT0047 :: กล้องวงจรปิด WATASHI รุ่น WCI170
C009 : SARONG Ks36,500.00